Waa maxay Fursadaha Xilliga 2 ee Saddexmidnimada Toddoba? Maxaa la filayaa? - Madadaalo
Waa maxay Fursadaha Xilliga 2 ee Saddexmidnimada Toddoba? Maxaa la filayaa?
Xiliga Labaad ee Saddex-midnimada Toddoba waxa uu leeyahay Shirqoolo
Saddexmidnimada Toddoba Xiliga 2
Saddexmidnimada Toddoba Xiliga 2 Xogta Jidka
Xiliga 2 ee Trinity Seven ayaa leh sheeko cusub
Saddexmidnimada Toddoba Xiliga 2 Taariikhaha Siideynta
Ma jiri doona Trailer loogu talagalay Toddobada Saddexaad ee Xiliga Labaad
Saddexmidnimada Toddobawaxay ku salaysan tahay taxanaha Manga ee Kenji Saito, kaas oo uu qoray oo uu sawiray Akinari Nao. Kenjo Saito waxa uu u bedelay sheeko iftiin ka hor inta uusan Seven Arcs Picture u sii dayn la qabsiga telefishinka. Dhacdadii ugu horreysay ee Saddex-midnimada Toddobaad ayaa la sii daayay Oktoobar 2014, waxaana ku xigay laba wareegyo. Trinity Seven Filimka: Maktabada daa'imka ah iyo Gabadha Alchemist waxaa la sii daayay Febraayo 2017, halka Trinity Seven: Heavens Library iyo Crimson Lord la sii daayay dabayaaqadii sanadkaas. Hal-abuurka bandhigga ayaa xaqiijiyay soo laabashada Trinity Seven horraantii 2019. Si kastaba ha ahaatee, waxba lagama sheegin tan iyo markaas. Ma xilli labaad ee Saddexmidnimada Toddoba ayaa jidka ku jira? Sii wad akhri si aad wax badan u barato
Trinity Seven ayaa sheegaysa sheekada Araga Kasuga, oo hogaaminaysa jiritaan maalinle ah ilaa masiibo xun, Qorraxda Madow, beddelo qaddarkiisa. Qorraxda Madow waxa ay kicisaa Burburka ifafaale, burburinta magaaladiisa oo afduubtay ina-adeerkii, Hijiri Kasuga. Isaga oo ujeeddadiisu tahay ilaalinta Aragga, ayuu Hijiri qoortiisa gashanaa calool-xumo. Deegaanka Araga wuxuu noqdaa mid mugdi ah oo laga naxo geerida Hijiri iyo qoyskiisa. Waxa uu ka baryaya jiritaan joogto ah, buuga mucjisada ahi waxa uu maskaxdiisa ka saarayaa xusuusta burburka iyo khasaaraha shakhsi ahaaneed. Araga waxaa lagu qasbay inuu xasuusto faahfaahin kasta oo ku saabsan noloshiisii ​​​​hore ka dib markii uu soo booqday saaxir, Lilith Asami, jebinta sixirka.
Hadda waxa uu leeyahay laba doorasho: ama u dhiib grimoire Lilith ama dhinto. Araga taa beddelkeeda waxa uu iska diiwaangeliyaa Royal Biblia Academy, dugsi sixir sixir ah, oo soo celiyay Hijiri, oo weli nool. Araga waxay la kulantay Trinity Seven, koox ka kooban todoba gabdhood oo ah sayidyada sixirka cajiibka ah oo ka caawin doona da'yarta inay helaan awoodaha sixirka oo ay si qoto dheer u sahamiyaan aduunka sixirka, dugsiga sixirka. Taxanaha anime Trinity Seven waa taxane majaajilo jacayl ah. Soo bandhigayaashu wali ma aysan soo bandhigin goobta, laakiin waxaan filan karnaa in qaybta labaad ay raacdo halka cutubka koowaad uu ka tagay iyada oo sidoo kale sahaminta dhinacyo cusub oo dabaq ah.
Akhri wax dheeraad ah: Adduunka oo dhan 80 maalmood gudahood Xiliga 2 Taariikhda Siideynta: Jilayaasha, Qaswadayaasha, qisada!
Waxaan filaynaa Lilith Asami, Arin Kannazuki, Levi Kazama, Yui Kurata, Lieselotte Sherlock, Mira Yamana, iyo Akio Fudou, oo ka kooban Todobada Saddexaad, inay ku soo laabtaan xilli ciyaareedka soo socda si ay uga caawiyaan Araga ilaalinta dadkiisa iyo magaaladiisa. Sheekadu waxay u badan tahay inay ku wareegayso Araga Kasuga. Jilayaal cusub ayaa sidoo kale la soo bandhigi karaa, iyadoo ku xiran sida ay soosaarayaashu rabaan inay u sii wadaan sheekada. Ma hubno kuwa cusub ee kooxda kabka loo qorayo la siin doono la'aanta wax cad oo qeexan oo ku saabsan kabka.
Anime-ka waxaa lagu heli karaa Ingiriisi xagga Crunchyroll iyo HiDive ee daawadayaasha aan ku hadlin Japanese. Isha ku hay booskan wararka taxanaha anime ee aad jeceshahay iyo bandhigyada telefishinka.
Lilith Asami waa xubin si fiican loo yaqaan Saddexmidnimada Seven iyo sidoo kale borofisar ka ah dugsiga uu Arata ku barto sixirka. Iyadu markii hore waa qabow oo aan soo dhawayn Arata, laakiin sida sheeko-abuurku u soo baxo, way jilcisaa oo waxay u noqotaa kheyraad qiimo leh isaga oo ku jira tababarkiisa mage. Inta lagu jiro taxanaha, dabeecadeeda waxa soo maray isbeddello la taaban karo, oo ay ku jiraan muujinta muhiimka ah ee ku saabsan aabbaheed.
Arin Kannazuki waa toddobada xubnood ee Trinity oo la ildaran xusuusta luminta nolosha hore. Maamulaha ayaa ku soo dhaweeyay dugsiga. In kasta oo lagu sawiray qof aan daryeel lahayn, waxay marmar u muujisay dareen Arata ah.
Levi Kazama waa xubin Toddobada Saddexaad waana mid ka mid ah saaxiibadii ugu horreeyay ee Arata ee Royal Biblia Academy. Laawi waa higgaad shamanic awood badan waana mid ka mid ah saddexda dagaalyahan ee ugu sarreeya adduunka.
Lieselotte Sherlock Lieselotte waxay markii hore ahayd kursigii labaad ee Kormeerayaasha Maktabada Boqortooyada. Iyadu waa saaxirad dhalinyaro ah oo qurux badan oo xubin ka ah Saddexmidnimada Toddobaadka iyo Royal Biblia Academy. Kadib waxay qiratay inay leedahay diiwaan dambiyeed.
Eeg Yamana waa madaxa amniga grimoire iyo xubin ka tirsan Trinity Seven iyo sidoo kale xubin Royal Biblia Academy ah.
Saaxiibka Mira ee grimoire-ilaaliya, Akio Fudou , waa xubin ka tirsan Royal Biblia Academy iyo Todobada Trinity, waxayna leedahay karti aad u wanaagsan.
Jilaagii ugu weynaa ee bandhigga,Arata Kasuga, wuxuu leeyahay shakhsiyad dib-u-dhac ah oo la nool Hijiri.
Yui Kurata waa todobada xubnood ee Trinity oo ay daawadayaashu u arkaan inay tahay walaashii Arata ka yar.
Kuwani waa dhowr ka mid ah jilayaasha badan ee ay taageerayaashu jeclaan lahaayeen inay ku arkaan taxanaha. Sheekooyinka dambe ee dhammaan jilayaasha ayaa ah kuwo soo jiidasho leh, waxaana kaliya oo aan rajayn karnaa inaan wax badan ka baranno iyaga oo u maraya anime caanka ah.
Akhri wax dheeraad ah: Xiliga South Park 25 - Taariikhda Siideynta La filayo & Cusbooneysiinta!
Kaydka Araga Kasuga ayaa raacaya isaga oo hogaaminaya jiritaan maalinle ah ilaa masiibo naxdin leh, Qorraxda Madow, ay bedesho aayihiisa. Dhacdada Burburka waxaa kiciyay Qorraxda Madow, kaas oo burburiyay magaaladiisa oo afduubtay ina-adeerkii, Hijiri Kasuga. Hijiri waxa uu qoortiisa gashan yahay gariir isaga oo rajaynaya in uu ilaaliyo Aragga.
Geeridii Hijiri iyo qoyskiisa, agagaarka Araga waxay noqdeen mugdi iyo mugdi. Waxa uu u ooyaa jiritaan caadi ah, buuga sixirkuna waxa uu tirtiraa xasuustiisa masiibada iyo khasaaraha shakhsi ahaaneed. Booqashada mage ka dib, Araga waxay ku qasban tahay inuu dib u xasuusto faahfaahin kasta oo jiritaankiisii ​​hore.
Hadda waxa uu leeyahay laba ikhtiyaar: ama u geyn grimoire Lilith ama lumay. Araga waxa ay iska diiwaan geliyeen Royal Biblia Academy, dugsi sixirka sirta ah, si loo helo oo loo badbaadiyo Hijiri, oo weli nool. Araga waxay la kullantay Trinity Seven, koox ka kooban toddoba dumar ah oo khabiir ku ah sixirka fantastik ah oo ka caawin doona ilmaha inuu helo awoodaha sixirka iyo sahaminta domainka sixirka.
Trinity Seven waa taxane anime ah oo ku saabsan khiyaali jaceyl. Sheekadu wali ma aysan soo bandhigin hal-abuurayaasha bandhigga, laakiin waxaan filan karnaa in cutubka labaad uu ka soo qaado meeshii ugu horreysay ee uu ka tagay iyada oo sidoo kale sahaminta wajiyo cusub oo dabaq ah.
In kasta oo aanu jirin taageere muhiim ah oo la socda, barnaamijka ayaa ahaa mid aad loo soo dhaweeyay oo caan ah sababo la xidhiidha laqabsiga kala duwan. Mid ka mid ah sababaha bandhigga aan weli loo kordhin xilli labaad ayaa ah sababtoo ah falcelintiisa xun. Sababtoo ah laqabsiga filimku si fiican ayuu u shaqeynayaa oo manga wuxuu leeyahay 20 qaybood oo wali wuu sii socdaa, barnaamijku wuxuu leeyahay awood badan. Abuurayaasha bandhiggu waxay heli doonaan waxyaabo ku filan oo ay ku shaqeeyaan waxayna awood u yeelan doonaan inay si fudud u cusbooneysiiyaan xilli labaad oo leh sheekooyin iyo dhacdooyin cajiib ah.
Dhanka kale, sii deynta labo filim ayaa saameyn ku yeelatay taageerayaasha. Natiijo ahaan, qofna ma oga inuu soo laaban doono iyo in kale. Tani waxay noqon kartaa farsamo loogu talagalay xayeysiiska si ay u muujiso in walxaha weli la soo saarayo, ama waxay si fudud u noqon kartaa hab ay taxanaha u sii wadaan sidii filimaan. Waxaa laga yaabaa in hal-abuurayaasha bandhigga ay rabaan inay joojiyaan sii-deynta xilliga soo socda ilaa filimka la sii daayo. Sitcom-ka ayaa la sheegay inuu ku soo laabanayo xilli labaad bishii Abriil ee sanadkaas horraantii 2019, laakiin taageerayaashu wali ma aysan maqlin wax rasmi ah.
Akhri wax dheeraad ah: Qabo Mars: Ciyaarta - Taariikhda Siideynta, Trailer, & in ka badan
Sida loo Download KIK Messenger ee PC?
Ilaa wakhtigaaga daa'imka ah ee 2: Taariikhda Siidaynta la filayo & Cusboonaysiinta!
kala soo bax filimada dhererka buuxa oo bilaash ah
sidaad wadankaaga uga badali lahayd youtube
sida loo xiro codsiyada iphone
hel qiimo dhimis amazon prime
tobanka filim ee bilaashka ah ee ugu sarreeya internetka